प्रदेश २ को यी पाँच उप–मेयर र दुई मेयरको पद धरापमा !
दल बदलुहरुको अवस्था
योसँगै मेयर सियाराम कुश्वाहा, रिना देवी, उपमेयरहरु गौरीशंकर जयसवाल, कान्ति देवी, सिमल साह, परनिया देवी र गिता देवीको पद धरापमा समेत परेको देखिएको छ ।
बेलुकी ६:३० बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को पाँच उपमेयर र दुई मेयरको पद धरापमा परेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले रौतहटका दुई मेयर र पाँच जना उपमेयरलाई आईतबारको निर्णय अनुसार स्पष्टीकरण सोधेको हो।
नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र छोडी एमालेको ओली समूहमा लागेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले दुई मेयर र पाँच जना उपमेयरलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
माओवादी केन्द्रले रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर शियाराम कुश्वाहा, मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना देवी साह, मौलापुर नगरपालिकाका उपमेयर गौरीशंकर जयसवाल, देवाही गोनाही नगरपालिकाकी उपमेयर परनिया देवी पटेल, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी उपमेयर कान्ति देवी महतो, माधवनारायण नगरपालिकाकी उपमेयर सिमल कुमारी साह र यमुनामाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गिता देवी साहलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
उनिहरुलाई सोमबारै स्पष्टीकरण पत्र समेत थमाईएको बताइएको छ । उनिहरु नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव लडेर मेयर उपमेयरमा निर्वाचित भएका छन । २०७४ सालमा पाँच वर्षका लागि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी र एमाले मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको थियो ।
तर, २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई खारेज गरेपछि दुवै पार्टी एमाले र माओवादी फेरी पहिलाकै अवस्थामा फर्केको हो अब नेकपा नभई साविक एमाले र माओवादी पार्टी नै कायम भएको हो ।
नेकपा खारेज भएपछि माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेर आहिले माओवादीलाई नै छोडेर एमालेमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले उनिहरुसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो । चुनाव जितेको दल त्याग गरेर अन्य दलमा प्रवेस गर्नेलाई पदमुक्त गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
यदि माओवादी केन्द्र परित्याग नगरेको हो भने २४ घण्टा भित्रमा चितबुझदो लिखित जवाफ सहित स्पष्टीकरण दिन पार्टीले उक्त मेयर र उपमेयरहरुलाई निर्देशन दिएको छ । चितबुझदो जवाफ नदिनेलाई पार्टीबाट नै निस्कासन गरी पदमुक्त समेत गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
यसअघि माओवादी केन्द्रले दल बदलेको भन्दै रौतहटका संघिय सांसद एवं शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र प्रदेश सांसद कुन्दन कुश्वाहालाई बर्खास्त गर्दै पदमुक्त गरिसकेको छ ।
जनकपुरकी 'आरती सिँह' मिसेज नेपाल २०२० की प्रतियोगी, भोटको लागि अपिल, अब केही घण्टा बाँकी
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मिसेज नेपाल टुरिज्म २०२० की प्रतियोगी लागि जनकपुरकी आरती सिँहले आफूलाई भोंट गरी जिताउन अपिल गरेकी छन् । आज (मँगलबार) हुने प्रतियोगिताको ग्राण्ड फिनालेको लागि बिहान १२
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मिसेज नेपाल टुरिज्म २०२० की प्रतियोगी लागि जनकपुरकी आरती सिँहले आफूलाई भोंट गरी जिताउन अपिल गरेकी छन् ।
आज (मँगलबार) हुने प्रतियोगिताको ग्राण्ड फिनालेको लागि बिहान १२ बजेदेखि नै भोटिँग सुरु भएको छ । अनलाइनबाटै प्रतियोगिताको थर्ड सिजनको फाइनल हुन लागेको जनाइएको छ ।
स्टार वान इन्टरटेनमेन्ट काठमाण्डौँले आयोजना गर्दै आएको प्रतियोगिताको “मिसेस नेपाल टुरिजम २०२० र नेपालका महिलाको शसक्तिकरण ” मूल नारा सहित आयोजना गरिएको सो प्रतियोगितामा मधेश मूलकी आरती सिँहले आफूलाई भोट गरी सहयोग गर्न अपिल गरेकी हुन् ।
प्रतियोगिताको भोटिङ राउण्डसम्म पुगेकी प्रतियोगी आरती सिंहले जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनलाईन मार्फत भोट गर्न सकिने जनाएकी छिन् । भर्खरै सम्पन्न मिस नेपाल इन्टरनेश्नलको प्रतियोगितामा मधेशकी छोरी सँध्या शर्माले बाजी मार्न सफल भएकी छिन भने आरती सिँहलाई पनि आ आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिए नतिजा कुशल आउने विश्वास गरिएको छ ।
उनले आफूलाई भोट गरिदिन यस प्रकारकी स्टेटस लेखेकी छन् ।
Google मा जाने , globalonlinepay.com type गरि ,Righ side मा EVENT मा click गरेपछि Mrs Nepal 2020 पेज खुलछ त्यसमा click गरेपछि Aarti Singh लाई भोट गर्न मिलछ। जुन यहाँहरुले आफ्ने मोबाइल वाट वा नजिक, इ -सेवा , IME Pay , हजुरको कुनै पनि mobile banking A/C, app / Master /Visa Card वात पनि vote गर्न सकिन्छ । एक चोटिमा 1देखि 5000 सम्म भोटिङ गर्न मिलछ। Vote = Rs.5 पर्छ । यहाँ को सानो सहयोगले बिजेता हुन मदत पुगछ धन्यवाद! Helpline:9851009749/9817631113.
'पार्टी फोडुवालाई पार्टीभित्र राख्दैनौ, उपेन्द्र यादवलाई कारवाही हुन्छ' : नेता महतो
ओलीलाई विश्वासको मत दिदैनौं : यादव
आफ्नो पक्षमा विश्वासको मतदान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको गुहार